Ahoana ny fampifandraisana ny iPad amin'ny TV | Vaovao IPhone
Ny efijery an'ny Apple iPhone Air 2, 16 ...iPad »/], miankina amin'ny maodely ananantsika, dia mety ho lehibe kokoa na handrakotra izay ilaintsika na tsia, na dia efa nomenay lanja aza izany rehefa mividy azy. Na izany aza, ny atiny dia ankafizina tsara kokoa noho izay azontsika atao foana mandany amin'ny fitaovana misy antsika amin'ny efijery lehibe kokoa toa ilay ao amin'ny efitrano fandraisam-bahininay.
Fahitalavitra marani-tsaina izay misy eny an-tsena ary telo na efa-taona farafaharatsiny, afaka mampiseho atiny sasany avy amin'ny iPad tsy mila mividy kojakoja. Fa raha tena te hankafy tanteraka ny tombony amin'ny fampisehoana ny atin'ny iPad amin'ny fahitalavitra efitrano fandraisam-bahiny isika dia tsy maintsy mividy Apple TV na fifandraisana HDMI hampifandray ny iPad amin'ny TV.
Ny fangatahana toa AllCast o iMediaShare mamela antsika, aorian'ny fametrahana ireo rindranasa maimaimpoana asehoy ny horonan-tsary sy sary amin'ny fahitalavitra Smart tsy misy tariby. Ny hany fepetra takiana dia ny fampifandraisana ny fitaovana roa amin'ny tambajotra Wi-Fi iray ihany. Raha etsy ankilany kosa ny televizionantsika dia tsy Smart TV, ny hany safidy ananantsika dia ny mividy Apple TV na tariby HDMI hampifandray ny iPad mivantana amin'ny TV.
Ny fiasan'ny Apple TV, tsy miditra amin'ny inona fitaovana very maina ivelan'ny EtazoniaTsotra be izany, satria raha mampiseho sary na sarimihetsika amin'ny fahitalavitra dia tsy mila mizara ny atiny amin'ny alàlan'ny safidy AirPlay fotsiny isika. Amin'izany no ahafahantsika mampiseho mivantana ny atin'ny iPad ao amin'ny efitranontsika, na lalao, sarimihetsika, sary…. Etsy ankilany, raha manao ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny tariby HDMI isika, ny atin'ny iPad dia haparitaka amin'ny efijery efitrano fandraisam-bahiny mba hampisehoana ny atiny rehetra amin'ny efijery malalaky ny tranonay.
Currently the Apple TV dia sarany amin'ny $ 69 / € 79 y Ny telegrama HDMI dia hita amin'ny vidiny 49 euro. Noho io fahasamihafana io, mora ny manombana raha, miankina amin'ny firenena onenantsika, afaka mahazo bebe kokoa amin'ny Apple TV isika na tsia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fampifandraisana iPad amin'ny TV